After Tigray #AbiyAhmed has duplicated same carnages through #AmharaRegionSpecialForces in Oromia – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAfter Tigray #AbiyAhmed has duplicated same carnages through #AmharaRegionSpecialForces in Oromia
After Tigray #AbiyAhmed has duplicated same carnages through #AmharaRegionSpecialForces in Oromia region since April 6/2021, under network block out.
Footages of villages destroyed in Gida Ayana, East Wallaga zone, 4/10/2021
Daandiin Oromiyaa keessaa cufamaa jira
(Daandii Finfinnee Jibuutii)
Garbummaa daangaa darbee sanyii duguuggaa irratti argamu mormuun daandiin guddaan Finfinnee Jibuutii geessu Qeerroo #Harargeedhaan cufamaa jira. Wareegama qaalii bakka hundaa kaffaluun diina yeroo xumuraaf of irraa darbina. Wabiin nagaa lammiilee Oromiyaa MCBOti
Itti Muddi Qeerroo
Walloo Aanaa Baateetti lollii hidhattoota Nannoo Affariin ummaata Oromoo irratti banamee jira.
Bakki lolli kun itti tahee ganda Coqortii jedhamu irraan araddaa kaarra jedhamu irratti hidhattoonni Nannoo Affar kun ummaata nagahaa irratti qawwee gurguddaadhan lolaa jira.
Lolaa Guyyaa har’aa kanan namni lama yoo madahuu nami tokko wareegamee jira. maqaan warra madahees.
2.Adam seydii jedhaman.
kan wareegame ammoo maqaan isaa
1 Adam waddimmuu jedhama rabbiin rahamataa hoo godhuuf.
Oromoo nuuf dirmadhaa jechuun ergaa isaanii dabarsanii jiru.
BBS: Ebla 10,2021
Godina Oromoo Walloo Aanaa Baatee Keessatti Humnoonni Addaa Naannoo Afaar Lola gaggeessaa jiraachuun gabaafamaa jira, Humnoonni Addaa Naannoo Affaar Waggoota 8 tif Itti fufanii Ummata Oromoo walloo irratti lola gaggeessaa jiraachuu kan himan jiraattonni, Dhiheenya kana, Daangaa Cehanii Aanaa Baatee bakkoota baay’ee dhuunfachaa jiru.
Lola yeroo gara garatti gaggeeffamaa jiruun, Lubbuun Qotee Bultoota Oromoo Walloo baay’een dabraa jiraachuu fi Qabeenyi Jalaa barbadaa’uun ni beekkama. Hnoonni Afaarii kanneen, Torbee kana keessa, Haleellaa geessisaa kan jiran yeroo tahu, gandoota Akka Gobeentii fi Mudhaa Halgee keessatti Ebla 4 irraa eegalee lola gaggeessaa jiran.
Guyyaa har’aatis Humnoonni Afaarii Aanaa Baatee Naannoo Garfa Ceeyfii Bakka Ganda Kaarraa je’amutti, Lola Cimaa gaggeessaa jiraachuu Jiraatan Naannichaa tokko BBS tti himee jira.
Lolli kuni Ganama Sa’aatii 2 irraa eegalee gaggeeffamaa kan ture yeroo tahu, Lola kanaan Oromoota Walloo irraa Namni Tokko lubbuu dhabuu dubbata.
Lolli guyyaa Har’aa Humnoota Addaa Naannoo Afaarin Baname kun kan durirraa adda kan je’u jiraatan kun, Meeshaalee gurguddaa fayyadamaa jiraachuu dubbata. Kayyoon Lola kanaatis Akkuma Mootummaan Nannoo Amaaraa Humna Addaa Isaa Ummata Oromoo Wallotti Bobbaasee, Aanaa Jiillee Dhummuugaa fi Harxummaa Fursee keessatti duguuggaa Shanyii raawwate, Humnoonni Addaa Naannoo Afaaris Raawwachaa jira je’e namni dubbifne kun.
RIB gidduutti waldhabdeen dhalate
Duula sanyii duguuggaa Wallaggaa irratti labsame irratti hooggantootni RIB sabaan Amaaraa fi Humni addaa Amaaraa uummata irratti haleellaan xiyyaaraa akka raawwatamuuf Abiy Ahmed,Mootii Cundhuuraa amansiisanii jiran. Gochi seenaa xureessu, dabni guddaan kun Oromoo fi Oromiyaa irratti hin raawwatamu jechuun RIB Iizii Lixaatti ajajaan Kutaa Waraanaa Nisir,Birgaader Jeneraal Nagarii Tolinaa dura dhaabbatee jira. Haleellaan xiyyaaraa uummata kana irratti raawwatamnaan fedhaan hojii keenyas dhiisneerra jechuun kaayyoo guddaa Abiy Ahmed fi leellistoota sirna moofaa dhadhaa bishaan buute godhaniiru.
Waraanni Shaabiyaa sakatta’insa Waraana Bilisummaa Oromoo, WBO Zoonii Kibbaaf Shaashamannee qubate dabballootaa fi ajajoota waraanaa bilxiginnaa waliin wal dharun dhagahame.
Tokkoo tokkoon miseensa waraana shaabiyaa ji’aan qarshii 20,000(Hooggantootaan ala) kan argatu cinaatti durgoo guddaan Kan kaffalamuuf ta’uunis beekkame.
Miindaan isaanii ji’a sadii si’uma takkaa akka kaffalamuuf gaafatanii baajatni waan jirreef, wal dhabdeen uumamee jira.
Imalli gara Gujiitti kaleessa taasifamuuf tures sababaa kanaan hafee jira jedhame.